दिउँसो सुत्ने बानी लागेकाे छ भने होस पुर्याउनु हाेला नत्र पर्न सक्छ यस्तो अापत ! - Babal Khabar
दिउँसो सुत्ने बानी लागेकाे छ भने होस पुर्याउनु हाेला नत्र पर्न सक्छ यस्तो अापत !
दिउँसो सुत्ने बानी लागेकाे छ भने होस पुर्याउनु हाेला नत्र शरिरमा लाग्न सक्छ यस्ता ख´तराक राे’गहरु !
धेरै मानिसहरुलाई दिउसाे सुत्ने बानि हुने गरेकाे छ अजकलकाे समयमा ! अझ भनाैँ काे-राेना सुुरु भएपछि लडका’उनकाे कारण अझ मानिसहरुलाई दिउसाे सुत्ने बानि धेरै बसेकाे छ तर दिउसाे सुत्नु राम्रो हुदैन दिउँसो सुत्ने बानीले यस्तो हुन सक्छ:-
१) ब्लडसुग’रको स्तर असामान्य:- दिनभरि सुत्दा रातमा निद्रा लाग्दैन । रातमा निद्रा पूरा नहुँदा भोक धेरै लाग्छ र यसले ब्लडसुगरको स्तर असामान्य गराइदिन्छ ।
डाय’बि’टिज वा मो’टोपनका कारण लिभर क्या’न्सरको ख-तरा रहन्छ । डायबिटिज टाइप टु रोगीको अत्यधिक तौल लिभर क्यान्सरका कारण बन्न सक्छ । सामान्यतः महिलाको कम्मरको मोटाइ ३० र पुरुषको ३४ इन्चभन्दा माथि हुनुहुँदैन ।
अमेरिकन क्यान्सर सोसाइटीको एक अध्ययनले कम्मरको मोटाइ आवश्यकभन्दा ५ सेन्टिमिटर बढे पनि क्यान्सरको आशंका ७ प्रतिशतले बढ्न जान्छ ।
२) डायबिटिजको ख-तरा:- दिउँसोको समयमा एक घन्टाभन्दा बढी सुत्दा टाइप टु डायबिटिजको ख-तरा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्छ । युनिभर्सिटी अफ टोक्योका अनुसन्धानकर्ताले हालसालै तीन लाख व्यक्तिमा गरेको अध्ययनले दिउँसो एक घन्टाभन्दा बढी सुत्दा धेरै नोक्सान हुने चे-तावनी दिएको छ। अध्ययनअनुसार दिनमा हुने लामो निद्राले रातको निद्रामा ग’म्भीर बाधा निम्त्याउँछ । यसले मुटुसम्बन्धी रोग, ब्रेन स्ट्रोक र डायबि’टिजको ख-तरा बढ्छ।
३) मा’इग्रेनको सम’स्या:- शरीरमा भिटामिन ‘के’को कमीका कारण माइग्रे’नको स’मस्या निम्तिन सक्छ । यो बच्चा र युवा दुवैमा हुन सक्छ। अमेरिका स्थित सिसिनाटी चिल्ड्रे’न्स हस्पिटल मेडिकल सेन्टरका शोधकर्ताहरूले मा’इग्रेनका बि’रामीमाथि एक अध्ययन गरेका थिए।
अध्ययनअनुसार भिटा’मिन डी, राइबो’फ्ले’विन तथा कोएन्जाइम क्यु–१० को कमी माइग्रे’नको सम’स्याका कारण बनेको देखियो ।विज्ञहरूले भिटामिन बी-२ भरपूर पाइने दूध, बदाम, पनिरले अं’गका को’षिकामा ऊर्जा दिएर माइग्रेनबाट बचाउन मद्दत गर्छ । ४) लिभर क्यान्सरको ख-तरा:- बिएमआई (बडी मास इन्डेक्स)३७ भन्दा धेरै हुँदा लिभर क्या’न्सरको ख- तरा २५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन जान्छ।
Prevउठ्ने बित्तिकै गर्नुहोस् यी काम, राता रात बन्नुहुनेछ धनी !
nextदैनिक दुईटा ओखर खानाले शरिरलाई मिल्छ यति धेरै नसोचेको फाइदा !